Maxaa lagu arkaa magaalada Prague (I) | Wararka Safarka
Waxa lagu arko magaalada Prague (I)
Susana Garcia | | Magaalooyinka, Prague
Prague waa magaalo yurubiyan ah oo soo jiidasho badan leh, qaasatan hadaan tagno qaybteedii hore. Waxay caan ku tahay qalcaddeeda iyo caanka Charles Bridge, laakiin runta ayaa ah inay jiraan waxyaabo badan oo la arki karo, laga bilaabo fagaarayaasha dhexe ilaa xaafadaha ay ka buuxaan taariikhda, matxafyada iyo opera. Maanta waxaan dib u eegeynaa meelaha muhiimka ah ee magaalada Prague.
Haddii aad tagto magaalada Prague fasax waxaad ku arkaysaa naftaada a magaalo leh qaab reer Yurub ah, oo leh dhismooyin duug ah iyo qaabdhismeedka caadiga ah. Waxaa jiri doona waxyaabo badan oo soo jiidan doona dareenkaaga iyo qodobo badan iyo taalooyin aad soo booqato, markaa liis ku samee kuwa ugu muhiimsan oo waxba ha moogaan
1 Qasriga Prague
2 Buundada Carlos
3 Magaaladii hore
4 Xaafadda Yuhuudda
5 Fagaaraha Wenceslas
6 Terezín, xeradii duurjoogta ee jir
Prague Castle ma aha hal dhisme sida aan qiyaasi karno, laakiin waa kan dhismaha qaabdhismeedka sare adduunka ugu weyn. Waxay ka kooban tahay jardiinooyin, dhismayaal diimeed, Kaniisada weyn ee San Vito oo aan gadaal ka hadli doonno, dhismayaasha la deggan yahay iyo dhismayaasha maamulka. Qasrigan waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad wuxuuna u adeegi jiray hoyga boqortooyada iyo hadhow madaxweynayaasha.
Dhismahan weyn waxaad ku arki kartaa meelo aad u xiiso badan, sida Callejón del Oro, oo ahayd dariiqa dahab-sameeyeyaasha haddana leh guryo midabo qurxoon leh. Waxa kale oo jira dhowr munaaradood, sida White Tower ama Powder Tower. Saacadaha booqashada badanaa waa 6:00 subaxnimo ilaa 23:00 galabnimo, in kasta oo taallooyinka laga yaabo inay leeyihiin saacado ka gaagaaban. Qiimuhu wuxuu ku xirnaan doonaa wadada aan marno. Dabcan waxaan u baahan doonaa waqti badan si aan u aragno meelaha ugu muhiimsan qalcaddan.
Buundada Charles Bridge waa mid ka mid ah sawirada ugu caansan ee Prague lana wadaago. Tani waxay isku xireysaa Magaalada Hore iyo Magaalada Yar ama Malá Strana. Shaki la'aan waa meesha ugu safarka badan oo aynaan dhaafi karin annaga oo aan dhowr sawir iska qaadin. Dhismihiisu wuxuu bilaabmay qarnigii 30aad, laakiin ma noqon doono ilaa qarnigii 1393aad inay dhammaystiraan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay XNUMX taalooyin quduusiin ah, kuwaas oo si tartiib tartiib ah loogu daray. Haddii aad rabto inaad sameyso rabitaan, raadi taalada Saint John ee Nepomuk, tii ugu horeysay ee lagu daro, oo lagu tuuray webiga XNUMX iyadoo la amrayo Wenceslao V. Haddii aad gacantaada saarto sawirka shuhadadiisa oo aad rabitaanka ka dhigto, waxay umuuqataa inay adiga ku siinayaan.
Old City waxay xarun u ahayd nolosha bulshada ee magaalada tan iyo qarniyadii dhexe ee fog, maantana wali waa goob aad muhiim u ah oo dalxiis. Dhexdeeda waxaad ku arki kartaa jidad qurxoon oo qurxan, guryo qurxoon iyo guryo duug ah iyo sidoo kale farshaxanno jidadka mara Meesha ugu dhexeysa shaki la’aan waa Fagaaraha Old Town, halkaas oo ay ku yaalliin cooshado iyo makhaayado si waqti loogu qaato ku raaxeysiga jawiga magaalada. Aaggan waxaan ku arki karnaa Kaniisadda Our Lady of Týn ee qaabka Gothic, Town Hall ama Clock Tower. Dhismayaashii hore, oo si buuxda loo daryeelay isla markaana midabbo qurxoon leh, runtii waa kuwo qurux badan.
Josefov waa magaca Xaafadda Yuhuudda, oo asalkiisu ka soo bilaabmay qarniyadii dhexe. Qeybtaan magaalada ka mid ah waxaa ku yaal sunagogyo, laakiin shaki la’aan wakiilka ugu badan iyo booqashada ay tahay inaad sameyso waa qabuuraha Yuhuudda, oo ah meesha kaliya ee loo oggol yahay in lagu aaso Yuhuudda magaalada. Waxaa la abuuray qarnigii XNUMXaad waxayna umuuqataa in waqtiga uusan dhaafin. Meel durba qeyb ka ah taariikhda magaalada, waana wacdaro. Tigidhada waxaa laga gadan karaa sunagogyada xaafadaha.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato taariikhda Yuhuudda magaalada, the Macbadka Pinkas Waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan, gidaarradiisana waxaa ku qoran magacyada Yuhuuddii ay dileen Naasiyiintu intii lagu jiray Xasuuqii Holocaust, iyo sidoo kale uruurinta qaar ka mid ah sawirradii ay sameeyeen carruurta xerada ku urursan Terezín.
Fagaaraha Wenceslas waa goob dhexe oo taariikhi ah oo dhacdooyinka qaarkood ay ka dhaceen sida bilowgii Kacaankii Velvet, laakiin runtu waxay tahay inay tahay meel u muuqata waddo weyn. Meeshan waxaa ku yaal bakhaarro casri ah, makhaayado iyo hoteelo, sidaa darteed waxay noqotay goob firaaqo badan. Maahan mid xiiso gaar ah leh, laakiin waa goob la booqdo haddii aan dooneyno inaan wax ka iibsanno.
Terezín, xeradii duurjoogta ee jir
Terezín waa magaalo 61 kilomitir u jirta Prague, sidaa darteed waa inaan qaadanaa maalin aan ku booqanno Xerada uruurinta ee Theresienstadt. Waxay leedahay qalcad weyn, oo ah geetada Yuhuudda, iyo tan yar, xerada uruurinta lafteeda. In kasta oo tani aysan ahayn xero xasuuq sida Auschwitz, haddana waa qabow inaad booqato goobta. Intaas waxaa sii dheer, ma jiraan qulqulatooyin ballaaran, sidaa darteed booqashadu waxay noqon doontaa mid ka sii xushmad badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka » Waxa lagu arko magaalada Prague (I)
Barranquilla, oo ah magaalada carnival ugu fiican Colombia